Wariyaha Ahna Taageeraha Ugu Wayn Arsenal Ee Piers Morgan Oo Soo Xushay Shaxda Kooxdii Abid Gunners Ugu Fiicnayd. - Gool24.Net
Wariyaha Ahna Taageeraha Ugu Wayn Arsenal Ee Piers Morgan Oo Soo Xushay Shaxda Kooxdii Abid Gunners Ugu Fiicnayd.
May 18, 2020 Mahamoud Batalaale
Wariyaha caanka ah ee Piers Morgan oo loo arko in uu yahay taageeraha ugu wayn kooxda Arsenal ayaa soo xushay shaxda kooxdii ugu fiicnayd ee Gunners.
Piers Morgan oo ah shaqsi aad ugu caan baxay sida aan kala joogsiga lahayn ee uu Arsenal u taageero ayaa soo xushay shaxda kooxdii ugu fiicnayd Gunners waxaana ka buuxa xidigihii taariikhda kooxda ugu muhiimsanaa.
Inkasta oo ay jiraan ciyaartoy magac wayn ku soo lahaa Arsenal oo boos ka waayay shaxda wariye Piers Morgan, haddana waa shax marka ay taageerayaasha Gunners arkaan ay xusuus wayn galayaan.
Piers Morgan oo ka hawl gala ITV isla markaana soo jeediya barnaamijkiisa si wayn loogu xidhan yahay ayaa muujiyay ciyaartoydii uu ugu jeclaa Arsenal ee uu shaxdiisa ku soo doortay.
Piers Morgan ayaa shaxdan ku soo doortay BBC Sport oo jamaahiirta Gunners waydiisay in ay soo xushaan shixihii ciyaartoydii Gunners ee koobka Premier league ku soo guulaystay.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa shaxda uu wariyaha caanka ah ee Piers Morgan uu ka sameeyay kooxda uu taageeraha wayn u yahay ee Arsenal.
Piers Morgan waxa uu qaabka shaxdiisa u soo doortay 4-4-2 ee shaxda dhaymanta loo yaqaan wuxuuna goolka ku soo bilaabay Seaman isaga oo afarta difaaca ah u soo wada doortay Tony Adams, Sol Campbell, Ashley Cole iyo Lee Dixon kuwaas oo dhamaantood ah xidigo magaca Gunners sare u soo qaaday.
Afarta khadka dhexe waxa uu Piers Morgan u soo xushay magacyo marka uu arko uu xusuusanayo maalmihii wacnaa ee Gunners waxayna kala yihiin Patrick Vieira, Ray Parlour, Emmanuel Petit iyo Robert Pires kuwaas oo ah halyayada xambaarsan taariikhda Gunners.
Labada weerarka waxa uu taageeraha Arsenal ugu wayn ee Morgan uu u soo xushay labada halyay ee kala ah Dennis Bergkamp iyo Thierry Henry waana shax ay ka buuxaan xidigo hore oo ay taageerayaashii Gunners ee sida fiican u soo gaadhay xusuus wayn ku leh.
Waxaa shaxda Piers Morgan ka maqan xidigo magac wayn kooxda ku soo yeeshay oo aanu boos u helin balse shaxdan ayaa ah mid xusuus wayn ku abuuraysa taageerayaasha uu Piers Morgan ka midka yahay.
Halkan kaga bogo Shaxda kooxda Arsenal ee Premier league ku soo guulaystay ee ugu fiican ee uu soo xushay Piers Morgan:
Haddaba akhriste, haddii aad taageere u tahay Arsenal, miyaad filaysaa in ay shaxdani tahay shaxda kooxdii ugu fiicnayd ee ciyaartoyda Gunners ee koobka Premier league ku soo guulaystay?